सुन्दरी प्रतियोगितामा नारी र पशुहाटका पशुहरु | PaniPhoto
पानीफोटो / May 7, 2012 /6Comments
कम्तिमा हाम्रा चेलीलाई यस्तो नबनाऔं (तस्विर: Freethought)
हिजो भएको मिस नेपाल प्रतियोगितामा २३ बर्षिया सृष्टि श्रेष्ठले उपाधी जितेकी छिन् ।
नारीलाई पशुहाटमा बेच्न राखिएको पशुजस्तो बनाईएको छ, जसलाई खरिदारहरु घुमिघुमि हेर्छन । ओठ जबरजस्ती च्यातेर कति दाँते रहेछ हेर्छन् । हिडाई कस्तो छ, एकछिन हिडाउँछन् । मनलाग्दी अनि अरु के के जाती परिक्षण गर्छन् र, मन परे खरिद गर्छन् । सुन्दरी प्रतियोगिताको छनौट पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ, केहीबेरको हिडाई, केहीबेरको बोलाई, केही प्रश्नको उत्तर अनि मनपरे सुन्दरीको ताज । अब भन्नुहोस्, पशुहाटका पशु र सुन्दरी प्रतियोगितामा नारीको स्तरमा कति फरक छ ?
सन्दर्भ सुन्दरी प्रतियोगिताको हो । यसका नाममा विकृति र विसंगति बढ्दै छन् । सुन्दरता र ब्यक्तित्वको नाममा नारीलाई पैसामा किनेर उसका संवेदनशिल अङ्ग हेर्ने र अरुलाई देखाउने यो असभ्य, प्राचिन जंगली व्यवहार र घृणित काम हो । आफ्नो व्यापार प्रबद्र्धन गर्न केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दुई चार अक्षर पढेका अल्लारे युवतीलाईमात्र होइन, केही रकम र व्यक्तित्वको ध्वाँस दिएर आफुलाई आधुनिक र सभ्य ठान्ने शिक्षित शहरिया युवतीलाई पनि नाङ्गिन लगाउँछन् ।
नोट : यो लेख पहिलो पटक २०६८ साउन ३१ मा पानीफोटोमा प्रकाशित भएको थियो ।
Posted in: खुल्ला बहस, पाहुनाको पालो
August 17, 2011 at 3:28 am / Reply
राजीबजी तपाईको दरिद्र मानसिकता देख्दा अचम्म लागेर आयो । तपाईको उमेर कुन वर्ग हो म जान्दिन । तर मानसिकरुपमा तपाई अति नै दरिद्र र वृद हुनुहुँदो रहेछ । तपाईले कहिले बडी बिल्डिङ हेर्नु भएको छ ? अनि कुस्ती र खेलहरु नी ? आफुमा भएको बलको प्रदर्शन गरेर उपाधी जित्न र प्रशंसा पाउँन सकिन्छ भने सुन्दरता प्रदर्शन गरेर जीवन बनाउँन किन नपाउँने ? कपडा खोलिसकेको छैन, सेक्सको भोक जाग्ने कस्तो पुरुष मानसिकता हो तपाईको ? भएको शरिर देखाउँदा के को यत्रो खैलाबैला ? त्यो पनि कला हो । योग्यता हो ।
अनि फेरि मिस्टर नेपालका बारेमा त केही पनि लेख्नु भएनछ, मिस्टर नेपालका युवाहरु चै कहाँ राखिएका जनावारहरु हुन् ? त्यो पनि भनिदिनुस् न है ।
May 7, 2012 at 10:35 pm / Reply
आश्थाजी तपाईलाई पुरुषमानसिकताको बारेमा त थाहा रहेछ । तर अलिकति गल्ति गर्नु भो । पुरुषमानसिकता समाजका सबैमा छ, महिलालाई हेर्ने र पुरुषलाई हेर्ने सबैको धारणा फरक छ । यो हाम्रो संस्कृति हो । यसलाई भत्काउँनु भनेको आफै अपमानित हुनु हो ।
rojita giri says:
August 17, 2011 at 3:29 am / Reply
I agree. Beauty contest should be banned.
August 18, 2011 at 5:15 am / Reply
आश्थाजी चामल हेर्न बोरा पल्टाउनु पर्दैन मुठ्ठी निकाले काफि हुन्छ । त्यसैले कसको मानसिकता कस्तो भन्ने कुराको जवाफ अब मैले दिनु नपर्ला । तपाइले ठिक भन्नु भयो उमेर अनुसारको सोचाई हुन्छ तर सबै सोचाइलाई उमेरले निर्धारण गर्दैन । यो संसार नि अचम्मको छ । जसले जस्तो रंगको चस्मा लगाएर हेर्छ उस्तै रंगको संसार देख्छ । तपाई अहिले रंगिन चस्मा लगाएर, रंगिन दुनिया देखि रहनु भएको छ अनि त्यहि संसारमा भुली रहनु भएको छ । भ्रममा परि रहनु भएको छ कि यहि हो वास्तविक संसार भनेर । बडी बिल्डिङ त्यसै बन्दैन रोजीता जी त्यसको लागि मेहनत र परिश्रम गर्नु पर्छ । मेरो जिउ ज्यान अहिले छैन तर चाहे भने र मेहनत हरे भने म पनि बनाउन सक्छु तर मेरो रुप परेको छैन भने चाहेर पनि मिस्टर नेपाल बन्न सक्दिन । कृपया एकपटक रंगिन चस्मामा खोलेर वास्तविक संसार हेर्ने कस्ट गर्नुस । मेरी सानी बहिनीलाई तिमि ठुली भए पछी के बन्छेउ नानु भनेर सोध्यो बने डाक्टर,इन्जिनियर,पाइलट, बैज्ञायानिक, पत्रकार या यस्तै अन्य कुनै बन्छु भनिन र सोहि अनुसार मेहनत गर्दै गइन भने पक्का बन्न सक्छिन तर चाहेर पनि मोडेल बन्छु, सुन्दरी बन्छु भन्न सक्दिनन र भने पनि र जति मेहनत गरे पनि रुप परेन, हाइट पुगेन भने बन्न सक्दिनन । कपडा खोलिसकेको छैन, सेक्सको भोक जाग्ने कस्तो पुरुष मानसिकता हो तपाईको भन्नु भएको रहेछ । रोजीता जी गास, बास, कपास जस्तै सेक्स पनि मानिसको आवस्यक कुरा हो । कपडा खोल्दा सेक्सको भोक जाग्नु स्वाभाविक हो । तर यहाँ मिस्स नेपालको चर्तिकलाले त त्यहाँ बसेका कथित जज भनाउदा नया राणा जर्साबहरुलाई बाहेक अरुलाई सेक्सको भोक लाग्छ जस्तो लाग्दैन । खानालाइ गज्यान्ग्गज्यां मुछेको कसलाई मन पर्छ र हैन? अन्त्यमा मैले कुनै पनि रुप र शरीर बेचेर खानुलाई कला र योग्यता भनेको छैन र म मान्दिन पनि । हाम्रा चेलाचेलीहरु कोहि पनि रुप र भाग्यको भरमा नबाचुन कर्म गरुन भने मेरो आसय हो । के गर्ने रोजीता जी निदाको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ यहाँ तर निधाको नक्कल गर्नेलाई सारै गारो हुन्छ । प्रतिक्रियाको धन्यवाद । जय होस् तपाइको।
अमृत नेम्बाङ says:
May 7, 2012 at 5:03 pm / Reply
खोलुन् खोलुन् । हेर्न त पाइन्छ, छुन त नपाउँने हो नि ।
Pravin Shrestha says:
May 7, 2012 at 5:04 pm / Reply
यस्तै हो सबै । सबैलाई जसरी भए पनि पैसा कमाउँनु छ । देख्नु भएन इन्डियामा सनि लिओनको कत्रो नाम छ ।